Kayak Boat Inflatable, Board Surfing Board Sup Rib Boats - Ruiyang
Teknolojia & kalitao
Ny traikefa amin'ny famokarana sambo inflatable
Ny mpanamboatra sambo tsara indrindra any Shina
Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2004 ary hita ao amin'ny tanànan'i Weihai, faritanin'i Shandong, Shina. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sambo inflatable tsara indrindra any Shina. Ny vokatra indrindra dia ahitana sambo RIB, sambo dragona Haipa, sambo PVC, sns. Ny ankamaroan'ireo andian-dahatsoratra ireo ary modely maherin'ny 40 dia nahazo mari-pankasitrahana IS09001: 2000 sy CE. Nohazoninay ny iraka hahatonga ny mpanjifa ho afa-po tanteraka. Ny traikefanay tamin'ny famolavolana sy famokarana nandritra ny taona maro dia ahafahantsika manamboatra sambo avo lenta kokoa ary miezaka ny mamoaka ny sambo tsirairay avy ao amin'ny orinasantsika.
Vidiny tsara indrindra
Ny solaitrabe dia fitaovana fanatanjahan-tena ampiasain'ny olona amin'ny surf. Teo amin’ny 5 metatra teo ho eo ny halavan’ny solaitrabe voalohany nampiasaina ary milanja 50-60 kg. Taorian'ny Ady Lehibe Faharoa dia niseho ny takelaka foam ary nohatsaraina ny endriky ny takelaka. Ny solaitrabe ampiasaina amin'izao fotoana izao dia 1,5 hatramin'ny 2,7 ​​metatra ny lavany 60 sm ny sakany, ary 7 hatramin'ny 10 sm ny hateviny. Maivana sy fisaka ny solaitrabe, somary tery kokoa ny eo anoloana sy ny tendrony aoriana, ary ny vombony mampitony eo amin'ny lamosina ambany. Mba hampitomboana ny friction, dia misy membrane ivelany misy savoka koa mipetaka amin'ny sisin'ny solaitrabe. Ny lanjan'ny solaitrabe rehetra dia 11-26 kg fotsiny.
Ny sambo mifofofofo dia karazana sambo mifofofofo, vita amin'ny fingotra ny ankamaroany ka antsoina koa hoe sambo mifofofofo. Ny uninflated dia azo tsindriana. Entin'ny motera na ny herin'olombelona. Azo ampiasaina amin'ny lalao fialamboly sy famonjena rano ary tanjona hafa izy io, ary ampiasain'ny tantsambo any amin'ny firenena samihafa.
14 taona famokarana traikefa, Tena za-draharaha sy mahay famokarana sy R&D ekipa
Iray amin'ireo mpanamboatra tsara indrindra amin'ny famokarana sy fanondranana sambo inflatable
Ny 10 mey teo, ny Chin voalohany...
Ny faha-123 Shina fanafarana sy fanondranana F...
Paddle Expo, Nuremberg, Alemaina, 2018
Ny 5 ka hatramin’ny 7 oktobra 2018, Weihai R...
Tamin'ny 10 May, nifarana tao amin'ny Foiben'ny Fivoriambe sy Fampirantiana Iraisam-pirenena Hainan ny Expo Consumer Goods Iraisam-pirenena voalohany ao Shina. Orinasa miisa 1.505 sy marika mpanjifa miisa 2.628 avy amin’ny firenena sy faritra 70 no…
Ny 123rd China Import and Export Fair tamin'ny 2018 (antsoina hoe 2018 lohataona Canton Fair) dia hatao amin'ny dingana telo. Ny 5 aprily ka hatramin’ny 5 mey 2018 any Guangzhou ny fotoana fanokafana, ary maharitra dimy andro ny dingana tsirairay. Ny...
Nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 7 Oktobra 2018, dia nanatrika ny fampirantiana fivoy iraisam-pirenena tany Nuremberg, Alemaina, ny Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. Ny fampirantiana dia fampirantiana varotra ara-panatanjahan-drano iraisam-pirenena ho an'ny kayak, lakana, boa ...
Miresaha amin'ny ekipantsika anio
Reharehanay ny manome tolotra ara-potoana, azo itokisana ary mahasoa
Manoro hevitra izao
Tongasoa ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hiara-miasa aminay
Zone Indostria manokana, Liulin, WeiHai, Sina.